Ka saar Flash Player, Mac guide, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadka labaad ee sanadkan 2021 iyo xanta iyo wararka ku saabsan Apple ma joogsanayaan. Dabcan sanadka wuxuu ku bilaawday si xoogan dareenkan waxaana heysanaa sacab mug leh oo war ah oo aan ku muujineyno todobaadkan labaad ee sanadka. Toddobaadka labaad ee Janaayo waa mid ka mid ah kuwa ugu xooggan xagga wararka iyo xanta sidaa darteed ma sii geli doonno wax dheeraad ah waxaanan la socon doonnaa waxa aan runti xiisaynayno, kuwaas oo ah wararka ugu muhiimsan waxaan ka imid Mac.
Waxaan ku bilaabaynaa war ka yimid Adobe laftiisa taas oo uu noogula dardaarmay gebi ahaanba ka saar Adobe Flash Player Mac-keena. Sababta maahan mid kale oo aan ka aheyn in barnaamijkaan si rasmi ah loo joojiyay oo hada uu duugoobay, marka hadaad ka saari karto, samee sidaas.
Wararka soo socda ayaa la xiriira cudurka faafa ee COVID-19 waana midda ku qasbeysa Apple iyo ganacsiyada kale a bakhaarradooda xirtaan 7 toddobaad gudaha Boqortooyada Midowday. Tani waa dharbaaxo kale oo soo food saartay ganacsiyada ay sababtay faafitaanka fayraska xun ee wali qarsoon sanadkaan cusub.
Waxaan si xagjir ah u bedeleynaa mawduuca waxaanna diirada saareynaa kuwa nasiibka leh isticmaalayaasha nasiibka u helay inay helaan Mac cusub ciidaha. Haddii aad gacanta ku hayso qalab cusub oo Apple ah, waxaa fiican inaad naftaada eegto tusahan yar oo leh qaar ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya markii aad qaadaneysid Mac.
Xiritaanka ma ilaawi karno wararka xanta ah Muraayadaha casriga ee Apple. Xaaladdan oo kale ayaa la sheegay inay horeyba ugu jiri doonaan wejiga labaad ee wax soo saarka waana inaan war ka helnaa kuwan goor dhow. Badeecad sanado badan xan ku jirtay taasna uma muuqato inay si rasmi ah hadda ku timid, waan arki doonaa haddii waqtigan uu yahay kii ugu dambeeyay iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ka saar Flash Player, Mac guide, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac